Intetho yamabhomu kaTom Perez, Calif. UDem uxelela abaProtestanti ukuba 'Bavimbe uFuck Up' - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko INtetho kaBhombu kaTom Perez, uSihlalo weDemokhrasi uxelela abaProtheli ukuba 'Bavimbe'
INtetho kaBhombu kaTom Perez, uSihlalo weDemokhrasi uxelela abaProtheli ukuba 'Bavimbe'
USihlalo weDemokhrasi yeSizwe uTom Perez uthetha ngabantu abamalunga nama-300 ukuba baqhankqalaze ngokuchasene nokugxothwa kukaMongameli uDonald Trump kwi-Federal Bureau of Investigation Director uJames Comey ngaphandle kwe-White House ngoMeyi 10 eWashington, D.C.Chip Somodevilla / Getty Izithombe
Kutheni le nto uJulian ezonda intaba
Ukuqhekeka ngaphakathi Iqela leDemokhrasi yayi boniswe ngokupheleleyo kwiNgqungquthela ye-California Democratic Party ngomhla we-19 kuMeyi eSacramento, eCalifornia. Iiprogressives zajoyina amalungu eNational Nurses United, bekhalazela ukwala kweDemocratic Party ukwala ukuxhasa inkqubo yomntu omnye yokunakekelwa kwempilo. Endaweni yokulandela ngentetho yeDemokhrasi ukuba ukhathalelo lwempilo lilungelo lomntu, ukusekwa Iidemokhrasi baphendule kubavoti ngokubakhalimela nokubahlasela.
Ngosuku lokuqala lwendibano, usihlalo weCalifornia Democratic Party uJohn Burton wakhwaza ngoonesi abaqhankqalazayo ukuba bavale i-fuck baphume baye ngaphandle. Ngokuzithoba uBurton uxelele abaqhankqalazi, Kukho abantu abathile abebelwela lo mbandela ngaphambi kokuba nizalwe nina.
Ukusekwa kweDemokhrasi yaseCalifornia, njengenkokeli yeqela lesizwe, ithande abaxhasi bamashishini kunye nezityebi, isingela phantsi inkqubo enye yokhathalelo lwempilo eya kuthi inike abantu baseMelika ukhathalelo lwempilo-hayi i-inshurensi yezempilo kuphela. U-Eric Bauman, usekela-sihlalo we-California Democratic Party kunye nomgqatswa wokuphumelela uBurton njengosihlalo weQela, yamkelwe I-12, 500 yeedola ngenyanga kumzi-mveliso wamachiza ukulwa nesiPhakamiso sama-61, esiya kuthi sithabathe ixabiso elinokuthi lichithwe naziphi na iarhente zikarhulumente okanye inkqubo yokhathalelo kumayeza amiselweyo kwinto ehlawulwa liSebe leMicimbi yeVeterans. UBauman ufumene ezi ntlawulo ngelixa efumana umvuzo wamanani amathandathu njengomcebisi kuSomlomo weNdibano yaseCalifornia u-Anthony Rendon. Isindululo 61 isilele Ukupasa ngo-Novemba 2016 emva koshishino lwamayeza wachitha izigidi zeerandi ukuyichasa.
Ngexesha le-rally kwi-capitol yaseburhulumenteni, uMlawuli we-National Nurses United uRoseAnn Demoro uxelele abaxhasi ukuba bangalindi ukusekwa Iidemokhrasi ukukhokela kukhathalelo lwempilo kunye nokwenza amayeza kubo bonke bayinyani. Abasayi kuphika ngokwala kwakhona ukuba le yintshukumo enokubenza babe ngabokuqala.
Sihlalo we-DNC UTom perez Uthethe kwiNgqungquthela yeQela laseCalifornia eDemocratic Party, enikezela ngeengcinga ezifanayo ezingenantsingiselo nezikhuthaze ii-boos, uqhanqalazo kunye nokugxeka amandla akhe okukhokela. Siqinisekisa ukuba ukhathalelo lwempilo lilungelo lomntu wonke, utshilo uPerez. Kwaye ayililo ilungelo labambalwa.
Ngaphandle kwebango lakhe, uPerez kunye nobunkokheli beDemocratic Party bayala ukuxhasa i-Medicare yabo Bonke, enyanzelisa i-Obamacare ifuna nje ukuphuculwa okumbalwa. I-Obamacare ayiqinisekisi ukhathalelo lwempilo njengelungelo, kodwa kunoko isebenzela ukwandisa izibonelelo kumashishini amayeza kunye nakwezempilo. UPerez ubanga ukuba Iqela leDemokhrasi ixhasa ukubonelela ngononophelo lwempilo kubo bonke abantu baseMelika, kodwa akazimisele ukuxhasa imigaqo-nkqubo eya kuthi yenze njalo. Emva kokunyanzela abaqhankqalazi ngalo mbandela kwaye ngokuqhula uthelekisa ubukho babo kwimfazwe yesidlo sasebusuku-utshintsho olumandla ukusuka ekuqinisekiseni kwakhe ukuba umbutho umanyene-uPerez ubuyele kwi IDemokhrasi yiya endaweni yokuxhasa ubume kwimicimbi yokwenyani.
Sinomongameli… andazi ukuba ngubani, uPutin, okanye uTrump, utshilo uPerez kwisihlwele esingaphefumlelwanga. Bakwi bromance. Oku kuyothusa ngokwenene. Ngomhla we-20 kaMeyi, iNkokeli yamaNcinci kwiNdlu uNancy Pelosi, ongayixhasiyo ukhathalelo lwempilo lomntu omnye, kugxilwe intetho yakhe kwi ICalifornia Democratic Party Indibano yaseRussia nayo.
Ngokwahlukileyo, kwi rally kubaxhasi bakaBernie Sanders kwiNgqungquthela kaRhulumente eyayibanjwe yiNational Nurses United nge-19 kaMeyi, owayesakuba nguSenator wase-Ohio State uNina Turner wachaza isidingo Iqela leDemokhrasi ukujongana nemiba echaphazela ukusebenza, abakumgangatho ophakathi kunye nabarhola umvuzo omncinci baseMelika. Kufuneka sijongane nokungalingani kwemivuzo, ubulungisa bobuhlanga, kodwa iiDems zifuna kuphela ukuthetha ngeRussia! yena utshilo Kwi-Twitter. Sifuna ipati emele abantu kwaye ingayenzi inkohliso. Ngamazwi kaJanet Jackson 'Yintoni le undenzele yona mva nje?'
'Umphefumlo' utyhiliza ubuGcisa bukaPstrong ukuQhubeka kunakuqala
Ukukhanya kwesepha kwi-Piazza: Le Amoré Luhlobo lweCreepy
'Superman II' Misela iMold kuyo yonke iMovie yeQonga eliza emva kwayo
Emva koNyulo lwaseGeorgia iFiasco, Kutheni abantu bengenako ukuvota kwi-Intanethi? Iingcali Zilinganisela.
iipilisi zokunciphisa umzimba ezisebenzayo
luhlobo luni lwepsychic i
Ufumene malini umfazi wejeff bezos
iinkqubo zokucoca amanzi ekhaya liphela
Izinto abantu ekufuneka bezazi ngawe
Uncedo olungcono kakhulu kwimisipha